Venus iyo Serena oo laga badiyay - BBC News Somali
28 Juunyo 2011
Tartanka Tennis Wimbledon ee magaalada London ka socda ayaa mar kaliya shalay ay ka hareen tartanka labada gabdhood ee walaalaha ah ee dalka Maraykanka, Venus iyo Serena Williams.
Labada gabdhood ayaa tobankii sano ee ugu dambeeyay ugu sareeyay tartankan, balse sanadkan 2011 tartanka Wimbledon waxay labaduba ku guuldaraysteen in ay gaaraan wareegga 4 ciyaartoyd ku tartamaan.
Serena waxaa ka badiyay Marion Bartoli, Venus-na waxaa ka adkaaday Tsvetana Pirinkova.
Serana iyo Venus Williams waxay ku guulaysteen tartanka Wimbledon sagaal ka mid ah 11 kii sano ee ugu dambeeyay tartamadii dhacay.
Serena ayaa tiri ma dareensani in aan iyadoo aan sharaf dhacsanahay ku laabanayo Maraykanka, waana garteed waayo muddo sanad ku dhow ayay ka maqnayd tartanka tennis-ka kadib markii ay ku dhaawacantay muraayad ay ku istaagtay meel maqaayad ah.
Venus iyada waxaa ka adkaaday Tsvetana Pirinkova oo ka timid dalka Bulgaria oo sanad ka hor kaga badisay qaybta afarta cayaartooy.
Labada gabdhood sanadkan uma wanaagsanayn.
Waxaa kaloo tartanka Tennis-ka Wimbledon ee gabdhaha ka haray gabadha nambarka koowaad ku jirta waa Caroline Wozniacki.
Tartanka Ragga ee Wimbledon
Dhinaca kale tartanka ragga, ayaa cayaaryahanka nambarka koowaad Rafael Nedal wuxuu kaga badiyay Del Porto 7-6, 3-6, 7-6, 6-4, oo ah 3 set iyo 1. Nadal, ayaa cayaarta kadib la shegay in baaritaan scan ah looga samaynayo lugta kadib markii iyadoo uu hitinayo uu dhamaystay cayaartan.
Cayaaryahanka Fish wuxuu ka adkaaday Berdych 3 set iyo 1.
Cayaayahanka Britain Murray, wuxuu isaguna ka adkaaday Gasquet oo Faranasiis ah oo uu kaga badiyay 3 set iyo 1.
Federer ayaa isaguna ka badiayay Youzhny, Tomic wuxuu ka adkaaday.
Tomic ayaa ka badiyay Melisse, Djokovic wuxuu garaacay Llodra, Tsonga ayaa ka adkaaday Ferrer iyo Lopez oo ka badiyay Kubot.
Sideedda cayaaryahanka ee isku soo hartay ayaa kala ah Nadal, Fish, Murray, Lopez, Tsonga, Federe, Tomic iyo Djokovic.